Mety hitarika sivana antserasera ve ny lalànan’ny fiarovana antserasera ao Fiji? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2019 8:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, 繁體中文, Español, English
Nolaniana tamin'ny volana Mey 2018 ny lalàna, roa volana taorian'ny nametrahan'ny biraon'ny mpampanoa lalàna izany mba hodinihan'ny parlemanta. Nilaza ny governemanta fa ilaina mba hahatonga ny aterineto ho toerana azo antoka ho an'ny vehivavy sy ny ankizy izany:
Fiji Sun Online, vavahadim-baovao lehibe, namoaka fanehoan-kevitra manohana ny fepetra:
Nanonona ny ampahany faha-efatra amin'ny lalàna ho mametraka olana ireo mpitsikera, satria mety hampihorohoroana ireo mpisera aterineto izany. Ity fepetra manokana ity dia mihevitra fa “fandikan-dalàna ny famoahana fifandraisana elektronika amin'ny fikasana hanisy ratsy olona” ary saziana dimy ka hatramin'ny fito taona.
Nampitandrina ihany koa ny manam-pahaizana fa na dia eo aza ny fikasana nambara fa hametraka fiarovana, dia mety hitarika sivana amin'ny fahalalahana miteny ny lalàna:
Farany dia nampitandrina ny tambajotram-pampahalalam-baovaom-paritra Freedom Forum ao Pasifika (PFF) fa “hanampim-bava” ny lalàna vaovaon'ny fiarovana an-tserasera fa tsy hiaro ny vahoakan'i Fiji. Monica Miller, mpiara-mitantana ny PFF Polynesia nilaza hoe: